Silver Hoof Apple Tree: famaritana sy sary, endri-javatra amin'ny karazany sy ny toetrany - Zaridaina - 2019
Grade misy voankazo tsy mahazatra - Silver hoof
Ny karazana sela universal Silver Silver dia mamoaka tsiranoka tsy mahazatra, izay ampiasaina amin'ny endrika mangahazo ary tsara ho an'ny famokarana siramamy, sokatra, voankazo ary maina.
Famaritana ny varotra volafotsy hoof
Ny fitomboan'ny natiora
Ny karazana manao ahoana
Ny karazam-bolo volafotsy dia avy amin'ny karazana applet mandritra ny fahavaratra. Ny karazana dia heverina ho vokatra, ririnina ary mafy orana. Ny fanoherana amin'ny aretina samihafa karazana dia ny salan'isa. Ny voankazo raha voatahiry tsara dia misy iray na roa volana. Hazo fitahirizana varimbazaha vita amin'ny volafotsy:
relative humidity air - 90-95%;
Ny fanangonana ao amin'ny fonosana hazo dia ilaina;
hafanana - 0 ° C;
ny kalitao eo amin'ny saha;
Apetraka amin'ny paoma ny apples.
Koa satria ny karazana poma dia avy amin'ny karazan-tena tsy mamokatra, ny vokatra dia vokatry ny pollenan'ny voninkazo hafa amin'ny karazany hafa.
Ny tsara indrindra dia mamolavola karazam-borona roa samihafa amin'ny lavaka efatra ka hatramin'ny dimy metatra avy. Ny pollinator dia tsara indrindra raha misafidy Anis Sverdlovsk.
Ny endriky ny hazo apeta dia manavaka ny haavon'ny hazo avo, ny satroboninahitra maivana amin'ny loko maitso maitso sy ny voankazo matevina amin'ny haben'ny habeny. Jereo ao amin'ny sary etsy ambany ny endriky ny poketrany Silver Hoof, ary vakio ihany koa ny famaritana amin'ny antsipiriany momba ilay hazo sy ny voany.
Medium in height. Ny satroboninahitra dia tsy fahita firy, fa miharihary be, mihodina ary mivelatra.
Ny sampana skeletal, miala ny tsangambato, amin'ny ankapobeny, eo amin'ny 90 degre ambanin'ny degrees, mahitsy, milamina. Ny hodi-janak'ireo sampana dia mamiratra amin'ny loko mavo.
Ny fananganana voankazo amin'ny kolchatka sy lefona. Ny jiro dia mibontsina, maitso maitso amin'ny loko, mahazatra eo amin'ny habeny, efa marefo.
Ny ravin'ny hazo varimbazaha Silver Hoof dia lehibe, lehibe amin'ny fotony, maitso maitso amin'ny loko miaraka amin'ny tendrony avo. Manana endrika oval avo izy io. Ny voninkazo dia fotsy sy maotina.
Ny voankazo dia tsy lehibe. Ny lanjan'ny pila iray dia 90 grama.
Ny hazo iray dia miteraka vokatra mitovy habe. Ny endrik'ilay poma dia marina, ny tavy dia manjavona, ny fifangaroana dia saika tsy hentitra. Mofo matevina, rakotra akanjo matevina, matevina. Ireo tarehimarika eo ambany dia tsy hita maso.
Hazo fotsy hoditra mavo-mavo, mivadika ho loko menamena. Ny tongotra dia tsy lava, matevina. Ny masomboly dia lehibe, boribory, mainty volomparasy.
Ny nofon'ny pèl dia fihinanan-kena tsara sy mamy ary mafy. Ny tsiron'ilay poma dia mamy, mamy, mamy ary mamy. Ny fofona dia nohazaina maoderina.
Titrated to-you - 0,9%;
Zavatra tsy ampy setroka - eo amin'ny 15%;
Ascorbic asidra - 12.5 mg isa 100 grama;
Ny nosy R-active - 112 mg isaky ny 100 grama.
Ny karazana hazo paoma Silver hoof dia natolotr'i Kotov LA tamin'ny alalan'ny fiaraha-miombon'antoka ny karazana Rainbow amin'ny varimaso Snowflake tamin'ny taona 1988. Ny fanatanterahana dia natao tao amin'ny toeram-pambolena fanandramana momba ny fambolena ny tanànan'i Sverdlovsk any Rosia.
Ny karazana varim-bazitra volafotsy dia karazana malaza be any Rosia, ka noho izany dia hita any amin'ny faritra maro:
Ny karazana dia hita matetika ao amin'ny faritra Orenburg sy Udmurtia. Distributed in Kazakhstan. Na izany aza, ny faritra voajanahary voajanahary dia ny faritra Siberiana Andrefana.
Miaraka amin'ny fambolena sy ny fikarakarana sahaza, dia mitombo tsara ny faritra samihafa any amin'ny faritra hafa. Ilaina ihany ny mandray an-tanana ny fahasarotany amin'ny aretina isan-karazany..
Apple Tree Silver Hoof manomboka mijinja amin'ny taona fahatelo na fahefatra aorian'ny fambolena.
Saingy ny vokatra amin'ny karazana mpanjifa avo dia azo amin'ny taona fahadimy ihany.
Ny vokatra dia mahavokatra. Mihinana ny voankazo amin'ny faran'ny volana Aogositra.
Ao anatin'ireo hazo apalalaka mitombo eo amin'ny sehatry ny fitomboana voajanahary, dia mihatra kely kokoa mialoha. Ny vanim-potoan'ny mpanjifa dia manomboka amin'ny voalohandohan'ny volana Septambra, ary maharitra hatramin'ny faran'ny volana Oktobra. Fahombiazana, isan-taona.
Ny vokatra sy ny haben'ny vokatra azo avy amin'ny Silver Hoof dia miankina amin'ny fikarakarana. Rehefa mamafy hazo amin'ny fampiasana zezika malaza. Na dia samy manana ny fahasamihafany amin'ny aretina isan-karazany aza ny karazany, dia tsy mitaky ezaka be ny fikarakarana ny pèl..
Ny varimbazaha vita amin'ny hazo paoma dia nambolena tao anatin'ny fizaran-tany telo:
ny fararano (faran'ny Septambra - ny volana Oktobra);
lohataona (faran'ny Aprily);
fahavaratra (faran'ny volana jolay).
na izany aza mbola nantsoina ny fararano ho an'io karazana io.
ZAVA-MISY: Rehefa mamboly ianao, dia mialà eo amin'ny toerana misy ny rano ambanin'ny tany. Raha tsy izany, dia hijanona ao anaty rano ny zana-ketsa, ary ho lo ny hazo.
Ireo toro-hevitra fototra amin'ny fanangonam-bozaka varahina volafotsy:
Mila mifidy zana-ketsa miaraka amin'ny rafitra fakan-danja efa novolavolaina ianao ary hividy azy ireo any amin'ny faritra misy fepetra mitovy amin'izany;
ny faritra tokony ho maitso;
Mifidy tanora izy, avy eo dia mifandray haingana kokoa amin'ny tany eo amin'ilay tetika izay ahitany azy;
Ny toerana fanangonam-bokatra dia tokony hosotroina tsara;
Mba hahatonga ilay hazo haniry matanjaka ary hitondra ny faratampony farafaharatsiny, manolo-tena ny hampiasana ny lemaka ahitra;
Miomàna tsara ny lavaka fantsona.
Ny algorithm fampielezan-kevitra dia tsotra. Ny marika tsara indrindra amin'ny lavaka fanangonam-bokatra amin'io karazana io: 0,6 x 0,6 x 0,5 m. Ny arofana ambony amin'ny tany voavoly dia mifangaro amin'ny latsaky ny ambany ary asaina ireto volkano manaraka ireto:
10 kg amina soavaly;
250 grama vita amin'ny hazo;
100 g sulfat potassium.
Fenoy ny lavaka fanangonan-drano miaraka amin'ny tany sy ny vongan-drano 2/3. Ny tany lonaka tsy misy fangarony dia narotsaka ambony. Ny rano dia manondraka ary mameno indray ny tany lonaka.
Ankehitriny dia afaka manamboatra hazo poma ianao, indrindra amin'ny fanampian'ny olona iray. Aorian'izany, aoka ho azo antoka fa hamehezana azy amin'ny hazo tsato-kazo amin'ny alalan'ny valo valo.
Zava-dehibe ny: Silver Hoof Apple Trees dia nokarakaraina tamim-pahamendrehana tamin'ny endrika 5x3, 6x3 m.
Ny taona manaraka aorian'ny fambolena, amin'ny lohataona dia zava-dehibe ny mamorona ny satro-boninahitra hazo amin'ny paoma. Ilaina ny manapaka ny faran'ny sampana tsirairay.
Ho an'ny efatra na dimy taona voalohany, aza omena ny voankazo hamokatra voankazo. Amin'ny taona voalohany amin'ny volana Aprily, ny hazo dia tokony hototoina miaraka amin'ireo fiarovana izay miaro amin'ny bibikely. Ity dingana ity dia tokony atao indroa.:
rehefa nanomboka nitsambikina sampana ny tsimokaretina;
alohan'ny hamelana tsimok'aretina.
Amin'izay dia tsy mila miangona intsony ny hazo mandra-pahatongan'ny volana Aprily manaraka. Ny lohataona tsirairay dia tokony hanome fikarakarana manokana ny hazo apalila:
fanangonam-bozaka miaraka amin'ny vovobony manokana.
Ny Silver Hoof apple dia midika ho fanoherana ny aretina isan-karazany.
Matetika ny hazo apalalin'io karazana io dia simba voankazo sy mofomamy.
Fruits Rotana - Aretin'ny karazana pilina, izay miditra ao afovoan'ny foetus amin'ny alàlan'ny ratra sy ratra noforonin'ny biby, havandra na fomba hafa. Ny famantarana voalohany dia ny endriky ny toerana matevina eo amin'ny hoditry ny pèl.izay hitombo mandra-pamonoana tanteraka ny paoma.
Indrisy anefa fa matetika ny tranga misy tsiranoka miaraka amin'ny scab.. Zava-dehibe ny mitarika fisorohana tsy tapaka.
Ny endriky ny fiterahana dia ny hoe, raha tsy hikapoka ny kofehy, amin'ny toerana voalohany Mahazo ny ravin'io hazo io izyary dia nifindra tany amin'ny voankazo. Mba hisorohana ny fahasimbana dia zava-dehibe ny mampisaraka ny hazo apalalan'ny voankazo hafa ao amin'ny zaridaina, manara-maso tsara ny zavamaniry ary manala vovobony foana sy manamaivana ny tany.
Ny antony fisehon'io holatra io dia ny fihenan'ny rivotra ao anatin'ny satroboninahitra na ny fahamalinana. Ny marika voalohany amin'ny fandokafana dia ny endriky ny manga-mavo eo amin'ny ravina., koa ao anaty sombi-mofo kely marobe, mamorona karôta, tapa-kazo eny amin'ny voankazo.
Mba hisorohana an'io aretina io dia zava-dehibe ny fanatanterahana ny fisorohana, izay ahitana ny: mampihinana lavenona ao anaty tany, mikarakara kalozona misy poizina, mamelona amin'ny komposta sy ny fananganana ny satroka voalohany.
Raha mbola tapaka ilay hazo, dia tokony hanomboka hanomboka avy hatrany ianao.. Ny fitsaboana dia manomboka amin'ny famenoana ny tany manodidina ny vokatra ary manondraka ny hazo amin'ny endrika samihafa. Amin'ny ankapobeny dia fepetra manerantany izany, izay fisorohana sy fitsaboana ny aretina rehetra amin'ny hazo zaridaina.
Ny fitsaboana tsara indrindra dia: vahaolana urea (amin'ny antsalany, 7-8 litatra no ilaina isaky ny hazo), oxychloride varahina, izay tsy maintsy ampiasaina aloha mialoha ny voninkazo, ary avy eo dia mandritra ny fisehoan'ny voankazo voalohany sy ny ranomamy Bordeaux, izay mora hosoloina solifara varahina.
Ahitana voankazo mamy miaraka amin'ny akora simika sarobidy ny hazo apollie Silverhoof.
Zava-dehibe ny fanatsarana ny paoma ao amin'ny hazo.
Miaraka amin'ny fanomanana manokana, dia mitsimoka any amin'ny tany rehetra ny siramamy. Ny hazo dia tsy mitaky fikarakarana manokana. Afo avo indrindra amin'ny aretina samihafa. Raha misy fahavoazana avy amin'ny bibikely, dia tsy mitaky ezaka be ny fitsaboana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Grade misy voankazo tsy mahazatra - Silver hoof